Sanur Beach any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Sanur Beach any Bali. Indonezia
Topimaso momba ny Sanur Beach any Bali
Sanur dia iray amin'ireo morontsiraka Bali vitsivitsy miaraka amina filomanosana milay. Any amoron-dranon'ny hotely misy azy io no misy azy. Halavirana manomboka eto ka hatrany Denpasar dia 11 km, ary mankany Seranam-piaramanidina Ngurah Rai - 16 km.
Ny halavan'i Sanur tenany dia manodidina ny 1,5 km. Izy io dia voafehin'ny Jalan Laut Pantai Karang amin'ny lafiny avaratra ary Kusuma Sari amin'ny lafiny atsimo. Ny sakan'ny morontsiraka dia manomboka amin'ny 10-40 m. Voasaron'ny fasika mavo maranitra izy.
Malemy ny fidinana ao anaty ranomasina, tsy misy rotsak'orana maranitra. Somary malefaka sy ambany fotaka ny any ambany, nefa tsy misy vato ao. Mazava be ny rano eto ary misy loko turquoise. Amin'ny fotoanan'ny fisondrotan'ny ranomasina dia manjavona kely izy, indraindray sendra ahidrano.
Indraindray dia mitondra ahidrano mankany amoron-tsiraka. Morontsiraka Sanur
Ny Sanur Beach dia mizara ho faritra avaratra sy atsimo. Ny avaratra dia ampahany tsy fizahan-tany amin'ny morontsiraka. Vitsy kokoa ny olona ary, arak'izany, vitsy ny fotodrafitrasa. Misy fientanam-po amin'ny faran'ny herinandro, raha ny Bali no tonga eto mba hiala sasatra. Tian'izy ireo ny miaraka miaraka amin'ny fianakaviany, manao fitsangantsanganana, milomano ary milentika masoandro. Hita mazava tsara ny sisintany avaratry Sanur: eto amin'ity toerana ity, ny fasika maivana dia mivadika mainty volkanika. South Sanur dia faritra fialantsasatra. Betsaka ny hotely tsara eto amin'ity faritra amoron-dranomasina ity, ary koa trano fisakafoanana, fisotroana ary spa. Ny mponina eo an-toerana koa dia mitsidika ity faritry Sanur ity, saingy matetika kokoa. Ankoatr'izay, na ny atsimon'i Sanur aza zara raha antsoina hoe toerana be tabataba, misy atmosfera milamina kokoa na latsaka.
Tsy misy onja any Sanur. Tsy fahita izany ho an'ny torapasika Bali. Misaotra an'io fa afaka milomano eto ianao miaraka amin'ny ankizy, tsy toy ny morontsiraka rehetra any Bali, izay misy onja lehibe mandondona ny olon-dehibe indraindray. Misy haran-dranomasina lava eo akaikin'ny morontsiraka. Breakwaters dia miorina eo amin'ny faritry ny morontsiraka mihitsy. Rehefa milomano eto dia tsy tokony hilomano ao aorinan'io vatohara io ianao, satria manomboka eo ny faritra misy onja mahery sy onja lehibe (hatramin'ny 4 m). Na izany aza, ny halaviran'ny morontsiraka ka hatrany amin'ny haran-dranomasina dia tena lehibe - sahabo ho 1 km. Noho izany, ny faritra anaty ao Sanur dia ampy hilomanosana.
Ny gazebo toy izany dia hita isaky ny metatra zato. Morontsiraka Sanur
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Sanur Beach
Sanur Beach dia miorina eo amoron'ny resort Sanur, any amin'ny morontsiraka atsimo andrefan'ny Bali. Ity no morontsiraka akaiky indrindra atsinanan'i Denpasar (11 km fotsiny ny halavany.
adiresy: Sanur Beach, Jalan Segara Ayu 80228, Sanur, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.682581, 115.264303
Tora-pasika Sanur amin'ny sari-tanin'i Bali
Sanur tora-pasika amin'ny sari-tanin'ny zanabola any Bali
Sarin'ny Sanur Beach
Sanur amoron-dranomasina any Bali
Filentehan'ny masoandro tao Sanur
Sanur amoron-dranomasina any Bali. Tora-pasika akaiky indrindra avy any Denpasar
Bali Sanur (Sanur Beach)